အဆိုပါ HARD DISK ကို DISASSEMBLE လုပ်နည်း - HARD DISK ကို - 2019
အဆိုပါ hard disk ကို drive ကို disassemble လုပ်နည်း
အခါ hard disk ကိုမဆိုဟာ့ဒ်ဝဲပြဿနာများသင်လျော်သောအတှေ့အကွုံရှိပါက, ကပညာရှင်များ၏အကူအညီမပါဘဲ, စနစ်ကိုယ့်ကိုကိုယ်ဆန်းစစ်ဖို့သဘာဝကျပါတယ်, ရှိပါတယ်။ ရုံအသိပညာအသင်းတော်ကိုနှင့်အတွင်းပိုင်းကနေယေဘုယျအမြင်နှင့်ဆက်စပ်ရချင်သောလူများမှာတစ်ဦး Self-disassembly disk တွေအပန်းဖြေစခန်းသည်လည်းရှိပါသည်။ အများအားဖြင့်မလိုအပ်သော HDD ၏ဤရည်ရွယ်ချက်သို့မဟုတ်အပြင်ဘက်တွင်အဘို့ကိုအသုံးပြုခဲ့သည်။
အဆိုပါ hard disk ကို Disassembling
ပထမဦးစွာငါဥပမာအားဖြင့်, အဖုံးခေါမဆိုပြဿနာများ၏ဖြစ်ရပ်အတွက် hard disk ကိုကိုယ့်ကိုယ်ကို fix ဖို့ကြိုးစားချင်သူကိုစတင်သတိပေးချင်တယ်။ မှားယွင်းနေခြင်းနှင့်တိလုပ်ရပ်များအလွယ်တကူ drive ကို system ထဲကနေရယူထားခြင်းကြောင့်ပေါ်သိမ်းဆည်းထားအချက်အလက်များ၏နောက်ကြောင်းပြန်မလှည်ပျက်စီးဆုံးရှုံးမှုများနှင့်အရှုံးဖြစ်ပေါ်နိုင်ပါတယ်။ ဒါကြောင့်ပညာရှင်များ၏ဝန်ဆောင်မှုများအပေါ်ပိုက်ဆံကယ်ဖို့ဆန္ဒရှိအန္တရာယ်, မယူကြဘူး။ ဖြစ်နိုင်လျှင်အားလုံးအရေးကြီးသောအချက်အလက်များ၏ backup လုပ်ထားမိတ္တူပါစေ။
အပျက်အစီးများတဲ့ hard drive ကိုပန်းကန်ပေါ်သို့လဲကျဖို့ခွင့်ပြုမထားပါနဲ့။ ဖုန်မှုန့်များ၏ပင်သေးငယ်တဲ့အစက်အပြောက်က disk ခေါင်းကိုလေယာဉ်၏အမြင့်ထက် သာ. ကြီးမြတ်တဲ့အရွယ်အစားရှိပါတယ်။ ပြီးတာနဲ့ပန်းကန်ဖုန်မှုန့်ပေါ်, ဆံပင်, လက်ဗွေရာဒါမှမဟုတ်ဖတ်ပြီးသားဦးခေါင်း၏လှုပ်ရှားမှုအခြားအတားအဆီးအဆိုပါပစ္စည်းကိုပျက်စီးစေခြင်းငှါ, သင့်ရဲ့ဒေတာကိုပြန်လည်နာလန်ထူကျော်လွန်ဆုံးရှုံးခဲ့ရပါလိမ့်မည်။ အထူးလက်အိတ်ထဲမှာစင်ကြယ်ခြင်းနှင့်မြုံပတ်ဝန်းကျင်တွင်ခွဲခြားစိတ်ဖြာမှု။
အောက်မှာဖော်ပြထားတဲ့အတိုင်းသင့်ရဲ့ကွန်ပျူတာသို့မဟုတ် laptop ကိုစံ hard drive ကိုဖြစ်ပါသည်:
နောက်ကျောစိတျအပိုငျးကိုပုံမှန်အားဖြင့်၎င်း screw နှစ်ခုတွင်ကျင်းပခဲ့သည်သော Controller, တစ်ဦးပြောင်းပြန်သည် "ကြယ်ပွင့်။ " ဤရွေ့ကား screw နှစ်ခုကတော့ကိုယ်ထည်၏ရှေ့ကိုလည်းရရှိနိုင်ပါသည်။ အချို့ကိစ္စများတွင်အပိုဆောင်း screw နှစ်ခုရုတ်တရက်လှုပ်ရှားမှုများကိုခြင်းမရှိဘဲ, အလွန်ချောချောမွေ့မွေ့အဖုံးဖွင့်, မမြင်နိုင် screw နှစ်ခုစားဖို့သို့သော်ပုံနှိပ်တံဆိပ်အောက်မှာပုန်းအောင်းနိုင်ပါသည်။
ဦးခေါင်းနှင့် disc ကိုပန်းကန်သူတို့ကိုယ်သူတို့: အရေးအသားနှင့်စာဖတ်ခြင်းဒေတာအတွက်တာဝန်ယူသောပါးပျဉ်းအောက်ရှိ hard drive ကို, သူတို့အစိတ်အပိုင်းများဖြစ်လိမ့်မည်။
ထိုကိရိယာ၏အသံအတိုးအကျယ်နှင့် disk တွေနှင့်ခေါင်းက၎င်း၏စျေးနှုန်းအချက်ပေါ် မူတည်. အများအပြားဖြစ်နိုင်သည်: တစျခုကနေမှလေး။ တစ်ခုချင်းစီကိုပန်းကန်ဗိုင်းလိပ်တံမော်တာအပေါ်တပ်ဆင်နေသည်, တက "တက်" ပေါ်တွင်တည်ရှိသည်နှင့်အခြားပန်းကန်ဘုရ်ှနှင့် bulkhead ကနေကွဲကွာနေသည်။ အသီးအသီးပန်းကန်နှစ်ဖက်စလုံးကစာဖတ်ခြင်းနှင့်စာရေးခြင်းအဘို့ဒီဇိုင်းကြောင့်ဦးခေါင်း, CD နှစ်ယောက်ထက်အဆပိုများနိုင်ပါသည်။
သည် loop မှတဆင့် controller ကိုထိန်းချုပ်ထားသောအင်ဂျင်၏စစ်ဆင်ရေးအားဖြင့်ဘီး Spinning ။ ဦးခေါင်း၏စစ်ဆင်ရေး၏နိယာမရိုးရှင်းတဲ့ဖြစ်ပါသည်: အဲဒါကိုထိခြင်းမရှိဘဲ, drive ကိုတစ်လျှောက်လှည့်, နှင့်သံလိုက်ဒေသများဖတ်တယ်။ ထို့ကြောင့်အဆိုပါ disc ကိုဤအစိတ်အပိုင်း၏အပြန်အလှန်အပေါငျးတို့သကာတဲ့လျှပ်စစ်သံလိုက်၏နိယာမအပေါ်အခြေခံသည်။
ဦးခေါင်း၏နောက်ကျောမှာကွိုင်ရှိပါတယ်, အဘယ်မှာလက်ရှိစီးဆင်းမှု။ ဤသည်ကွိုင်နှစ်ခုအမြဲတမ်းသံလိုက်၏အလယ်တွင်၌တည်ရှိ၏။ လျှပ်စစ်လက်ရှိ၏ခွန်အားဘားတစ်ဦးအထူးသဖြင့်ထောင့်ကိုရွေးကောက်ပြီးမထွက်ရလျှပ်စစ်သံလိုက်လယ်သက်ရောက်သည်။ ဒါကဒီဇိုင်းအထူးသ controller ကိုအပေါ်မူတည်ပါသည်။
အဆိုပါ Controller ကိုတွင်အောက်ပါဒြပ်စင်များထောက်ပံ့:
ထုတ်လုပ်သူ, ကိရိယာစွမ်းရည်, မော်ဒယ်နှင့်စက်ရုံအမျိုးမျိုးကအခြားဝိသေသလက္ခဏာများနှင့် ပတ်သက်. ဒေတာနှင့်အတူ chipset;
အဆိုပါစက်မှုအစိတ်အပိုင်းများကိုထိန်းချုပ်တစ်ဦးက controller ကို;
ဒေတာလဲလှယ်မှုအတွက်ဒီဇိုင်းရေးဆွဲတစ်ဦးက cache ကို;
ဒေတာများထုတ်လွှင့် module တစ်ခု;
installed module တွေ၏စစ်ဆင်ရေးကိုထိန်းချုပ်သေးသေးလေး Processor ကို;
အသေးစားလုပ်ငန်းများအဘို့အ chips ။
ဤဆောင်းပါး၌, ငါတို့သည် hard drive ကို disassemble ဖို့ဘယ်လိုဆွေးနွေးနှင့်အဘယ်သို့ဆိုင်အစိတ်အပိုင်းများကပါဝင်ပါသည်။ ဤအချက်အလက်သည် HDD ၏နိယာမအဖြစ်စစ်ဆင်ရေးကာလအတွင်းပေါ်ပေါက်သောဖြစ်နိုင်သောပြဿနာများကိုနားလည်ရန်ကူညီပေးပါမည်။ ပြီးတာနဲ့နောက်တစ်ကြိမ်ကျနော်တို့သတင်းအချက်အလက်များရင်းနှီးကျွမ်းဇာတ်ကောင်များ၏ဖြစ်ပါတယ်အသုံးမပြုနိုင် drive ကို disassemble ဖို့ဘယ်လိုပြသတိပေးတယ်။ သင့် hard drive ကိုပုံမှန်လည်ပတ်နေသည်လျှင်, မိမိတို့၏ကိုယ်ပိုင်၏ခွဲခြမ်းစိတ်ဖြာထွက်သယ်မဖွစျနိုငျ - ကကို disable ၏မြင့်မားသောစွန့်စားမှု။
ဗီဒီယို Watch: Behind-the-Scenes at the Bachelor in Paradise Resort (စက်တင်ဘာလ 2019).